Ilay Lalàna Japoney Miady Amin’ny Fihokoana, Mahatonga Resabe, Nolanian’ny Antenimiera · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Babusha Verma
Voadika ny 28 Aogositra 2017 14:32 GMT
Milaza ny tsy fahafaliany amin'ilay tolodalàna avy amin'ny governemanta natao hiadiana amin'ny fihokoana ny solombavam-bahoakan'ny mpanohitra, Yamamoto Taro, nialohan'ny nandatsahany vato. Maribolana: « Nekena sy nolanian'ny Efitra Ambony ao Japàna ilay lalàna miady amin'ny fihokoana ». Dikasarin'ny fantsona ofisialy YouTube an'ny ANN News.
Ny 15 jona, nandany lalàna miteraka resabe ary natao hiadiana amin'ny fihokoana ny antenimiera Japoney. Na teo aza ny fanahian'ireo mpanao politika mpanohitra, ireo olon-tsotra ary na ireo mpaneho hevitry ny Firenena Mikambana aza, mikasika ny ho hiantraikan'ny fomba manjavozavo nandrafetana ilay lalàna, eo amin'ireo olompirenena tsotra Japoney tsy misy ifandraisany amin'ny heloka nomanina, nampiasa ny paikady rehetra azony natao ny fiaraha-mitantana tarihan'ny Praiminisitra Shinzo Abe mba hanembantsembanana ny adihevitra sy hanaovana amboletra amin'ny alalan'ilay rafitra japoney ahitàna efitra (antenimiera) roa mialohan'ny fialantsasatry ny antenimiera miantomboka ny 18 jona.
Ny fanjavonjavonan'ilay lalàna vaovao, izay mahasarona heloka bevava maherin'ny 300 eo, dia manaisotra tsikelikely ireo fahalalahan'ny tsirairay manokana ao Japana, amin'ny fanomezana ireo manampahefana fahefana fanaraha-maso midadasika kokoa, amin'ny fanokafana ny fandikàna malalaka ilay fanontaniana hoe iza no afaka arahana maso.
Nanamafy ny fiaraha-mitantana eo amin'ny fitondrana any Japana, tarihan'ny Praiminisitra Shinzo Abe, fa nilaina ilay lalàna vaovao ho fisorohana amin'ireo Lalao Olaimpikan'i Tokyo ny taona 2020, amin'ny fotoana ahitàna fa mitombo ireo loza mitatao amin'ny fandriampahaleman'ny firenena.
Kanefa, tsy nandray ho anaty kajiny ny zava-misy io hevitra io hoe efa nanandrana nanova hatry ny taona maro ilay lalàna misy mikasika ny famaizana ny heloka nomanina sy ny fanarahana maso ny heloka bevava any Japana ny Antoko Liberaly Demaokraty-ny. Ny tanjona, araka ny governemanta Japoney, dia ny hiditra ao anatin’ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana miady amin'ny heloka nomanina misandrahaka aminà firenena maro.
Nilaza ihany koa ny governemanta fa ny hanarahana ilay fifanarahan'ny Firenena Mikambana no tena tanjon'ilay lalàna vaovao. Kanefa, nanamarika tao aminà lahatsoratra ho an'ny Japan Times i Colin Jones, mpampianatra lalàna izay mampianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Kyoto, fa nitsikera nivantana ilay lalàna vaovao ireo solontena roa avy amin'ny Firenenana Mikambana :
Hatramin'ny vanimpotoana Meiji (1868-1912), nampiasaina ireo fifanarahana na ireo firenena hafa mba hanamarinana ireo lalàna tsy tian'ny Japoney na tsy ilainy, noho izany, tsy misy zava-baovao eto. Kanefa, amin'ity tranga ity, tsy nisy ezaka matotra mba hamoahana ireo fahabangana marina tao amin'ireo lalàna efa nisy – ohatra hoe ireo olon-dratsy tafaporitsaka noho izy ireny – ary ny hoe iza no ho voavahan'ireo andalan-dalàna vaovao. Ny tena marina, tsy hitako na aiza na aiza mihitsy tao amin'ilay fifanarahana ny tsy maintsy tokony hanaovana ilay fihokoana ho heloka bevava, afa-tsy ny mikasika ny famotsiambola.
Ny maha zava-dehibe ny fifanarahan'ny Firenena Mikambana mba hanamarinana ny fisian'ilay lalàna vaovao dia afaka manazava ny antony manokana toa mahasorena ny governemanta tamin'ireo ahiahy navoitry ny iray monja amin'ireo manampahaizan'ny Firenena Mikambana mikasika ny mety hisian'ny tsy fahamarinan'ny fitsaràna sy ny fanitsakitsahana ireo fahalalahan'ny sivily.
Ireo manampahaizan'ny Firenena Mikambana dia i Joseph Cannataci, Mpitatitra manokan'ny Firenena Mikambana momba ny zo ho an'ny fanajana ny fiainana manokana, sy i David Kaye, Mpitatitra manokana amin'ny fampiroboroboana sy fiarovana ny zon'ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny. Tao amin'ny tatitra navoaka ny Mey 2017, notsikerain'i Kaye ilay lalàna Japoney mikasika ny tsiambaratelon'ny Fanjakana, napetraka tamin'ny faran'ny taona 2014, izay nisy vokany ratsy teo amin'ny fanaovana gazety sy ny fahalalahana miteny.
Ao amin'ity taratasy mitokana nalefa ho an'ny governemanta japoney ity (izay afaka vakiana feno ato), nalefa tamin'ny volana Mey ihany koa, nitsikera ilay tolodalàna vaovao miady amin'ny fihokoana i Cannataci, izay niadiana hevitra tao amin'ny kaomisiona nialohan'ny nandaniana azy ho lalàna. Tao amin'ny taratasiny, miahiahy i Cannataci ny amin'ilay lalàna malalaka be hoe « hampisy teritery amin'ireo zo hanana fiainana manokana sy ny fahalalahana miteny » ao Japana.
Raha tsindrina manokana, milaza izao ao amin'ny taratasiny i Cannataci, hoe ilay lalàna any Japana izay natao ho an'ny heloka bevava nomanina, dia tsy mamaritra mazava ny atao hoe « vondrona mpanao heloka bevava mpikomy », kanefa ahitàna karazana heloka miisa 277 mety ho tafiditra amin'ilay lalàna ilay izy. Ny mety ho vokatry ny fampiharana ilay lalàna, hoy i Cannataci ao amin'ny taratasiny, dia ny fanaovana ho ara-dalàna sy fanamoràna ny fanarahana maso ataon'ny governemanta amin'ireo ONG hita ho mihetsika manohitra ny tombotsoan'ny governemanta.
Nanamarika ihany koa i Cannataci hoe arovan'ilay lalàna miady amin'ny heloka nomanina ireo heloka bevava « izay tsy misy ifandraisany amin'izay mety ho takatry heloka nomanina sy ny fampihorohoroana », toy ny fangalarana ny vokatry ny ala sy ny fanimbàna ireo harena ara-koltoraly.
Namaly ny taratasin'i Cannataci ny governemanta Japoney, nilaza fa « tena tsy matotra mihitsy » ny fanehoany ny lalàna miady amin'ny fihokoana mihitsy ny fanehoany azy, ary nampiany fa tsy « fihetsiky ny manampahaizana mijery ny votoatin-javamisy » mihitsy ny azy.
Kanefa, misy feo Japoney manao fanamarihana mitovy amin'ny an'i Cannataci ihany koa. Ny Alakamisy taorian'ny fandaniana ilay tolodalàna, nanambara izao i Osaka Seiji, lehilahy mpanao politika avy amin'ny antoko mpanohitra ao anatin'ny kaomisionan'ny antenimiera mpanidika ny raharaha mikasika ny lalàna, izay namakafaka ireo drafitra voalohany tamin'ilay tolodalàna :
Notoheriko tanteraka ny fanamarinan'ny governemanta io lalàna miady amin'ny fihokoana io nanomboka tamin'ny nanolorana ilay tolodalàna tao amin'ny “Diète”. Mety hisy mihitsy ny tranga hoe mihitatra lasa misy fiantraikany amin'ireo olom-pirenena tsotra ilay lalàna natokana hiadiana amin'ireo vondronà mpanao heloka nomanina. Tsy manipika mazava ilay lalàna hoe iza, rahoviana ary aiza no midika ho heloka bevava ny « fanomànana». Ny lasibatr'ilay lalàna dia mifanohitra (amin'ireo mety hiantefany). Nahoana isika no nisahirana niady hevitra momba io tolodalàna io tao amin'ny diète ? Tsy tokony nofidiana mihitsy aza io lalàna io.
Yamamoto Taro, politisiana fantadaza mpiandany amin'ny fakàna ny fon'ny vahoaka, nanambara fa hisy fiantraikany amin'ireo olon-tsotra ilay lalàna vaovao :
Yamamoto Taro : « Horaisin'ilay lalàna vaovao ho sanatria olo-meloka daholo ve ireo rehetra miaina ato amin'ity firenena ity? »
Nanao hetsi-panoherana an'ilay lalàna vaovao mihitsy ireo olom-pirenena tsotra.
Nampiakatra sarin'ny hetsi-panoherana nanoloana ny “diète”-pirenena nandritra ny fijerena antsipirihany ilay lalàna miady amin'ny fihokoana aho ny alin'ny 15 jona. […]
21 ora izayHong Kong (Shina)